स्वास्थ्य – Rastriyapatrika
सीमा राना (नाम परिवर्तन) अहिले २० वर्षकी भइन् । उनी काठमाडौँकै एक कलेजमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन्। थापाथलीस्थित प्रसुति गृहमा भेट हुँदा उनी गर्भपतनका लागि आएकी थिइन् । अविवाहित उनले केटा साथीले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न नमानेकाले गर्भ रहेको बताइन् । सीमा मात्र होइन काठमाडौँका विभिन्न क्लिनिकमा दिनहुँ जसो स्कुल÷कलेजका किशोरी असुरक्षित सम्बन्धपछि रहेको […]
बिनासित्ति मेरो हात हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ । किन होला ? को साझा समस्या र जिज्ञासा हो हातखुट्टा झमझम गर्नु । प्रायःले बिनासित्ति हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस गर्छन् । खाशमा यसो हुनुको ६० देखि ७० प्रतिशत कारण मानसिक हो । मानसिक रुपमा त्यस्तो महशुस गरेर धेरैले आफूलाई यो समस्या कहिल्यै समाधान नभएको भनेर अस्पतालको चक्कर काट्छन् । […]
– डा. राजेन्द्र भद्रा- म २० वर्षीया युवती हुँ । म हप्तामा एकपटक यौनसम्पर्क गर्छु । ममा चाहना पनि छ कि म यौनसम्पर्क गरूँ, तर किन हो ममा उत्तेजना नै हुँदैन । शारीरिक रूपमा मलाई सम्बन्धका लागि कुनै समस्या छैन । के मैले कुनै चिकित्सकबाट जाँच गराउनुपर्छ ? के यो कुनै रोग हो ? – […]
– डा. राजेन्द्र भद्रा मेरी श्रीमती अहिले गर्भवती भएकी छिन् । यस्तो बेला यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? ५१८९ तपाईंले आफ्नी श्रीमती गर्भवती भएको अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुको अर्थ फगत चासो मात्र नभै तपार्इंको श्रीमतीप्रतिको स्नेहभाव पनि हो । गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ताले धेरै दम्पती पिरोलिरहेका […]
– डा. राजेन्द्र भद्रा यौनसम्पर्क गर्दा मेरो लिंग दर्‍हो (कडा) हुँदैन, किन होला ? अब मैले के गर्नुपर्छ ? तपार्इंले लिंग दर्‍हो नहुने कुराबाहेक अन्य केही जानकारी दिनुभएको छैन । न उमेरका बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, न तपाईंले यौनसम्पर्क राख्दै आएकी महिलासँग तपाईंको सम्बन्ध के हो उल्लेख गर्नुभएको छ । पहिलेदेखि नै यस्तो थियो र […]
कामवासना भन्ने कुरा यौनिक रुपमा स्वस्थ व्यक्तिको अनिवार्य विषय हो । स्वस्थ व्यक्तिमा यौनचाहना व्यक्तिमा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ र भएन भने त्यसले व्यक्ति यौनिक रुपमा अस्वस्थ छ भन्ने कुरा इंगित गर्छ । मानिसले यौन क्षमता बढाउन विभिन्न खाले उपाय अपनाउछन् । हामीले यहाँ त्यस्ता केही खानेकुराको सूचि प्रस्तुत गरेका छौँ जो मानिसमा कामवासना बढाउन कामयावी […]
स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने महिलाहरुलाई डाक्टरको यस्तो सुझाव भर्खरै मात्र चीनको सान्यामा आयोजित ‘मिस वल्र्ड’को श्रीपेच जितेर स्वदेश फर्किएकी भारतीय सुन्दरी मानुषी छिल्लरले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक ?पमै भनिन्, ‘भारतमा –(मिन्सुरेसन) महिनावारीका समयमा स्वास्थ्य सरसफाइ अझै पनि एउटा ठूलो समस्या हो ।’सन् २०१७ कि विश्व सुन्दरी छिल्लर मिन्सुरेसन हाइजिनबारे जनचेतना फैलाउने एउटा परियोजना ‘शक्ति’मा पनि […]
लामो समय एउटै ‘अण्डरवेर’ लगाइराख्नुका जोखिम यस्ता छन्
एजेन्सी । केही मानिसहरु आफ्नो अण्डरवेर लामो समयसम्म पनि फेर्दैनन् । कारण उनीहरुलाई यसका नकरात्मक प्रभावहरु थाह नभएर पनि हुनसक्छ । केही असामान्य परिस्थिती बाहेक सामान्यतय अण्डरवेर नफेर्दा यसबाट हुनसक्ने धेरै स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अण्डरवेर परिवर्तन नगर्दा अण्डरवेरमा व्याक्टेरिया जम्मा हुनसक्छ । जसका कारण छाला चिलाउने समस्या आउनुका साथै […]
सहवासमा स्त्री र पुरुषमध्ये कसलाई बढी आनन्द आउँछ? शास्त्र यसाे भन्छ …
मान्छेले परेर मात्र होइन, पढेर पनि जान्दछ भन्ने दृष्टान्त महाभारतमा फेला पर्छ। भीष्मको बारेमा यी आजीवन ब्रह्मचारी हुन् भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। यी किन ब्रह्मचारी हुन पुगे भन्ने विभिन्न ढङ्गबाट कथाहरू रचिएका छन्। त्यो बेग्लै विषय हो। जे होस्, ब्रह्मचारी भनेपछि यिनलाई स्त्री विषयक र अझ सम्भोग विषयक कुरा पक्कै पनि थाहा छैन होला भन्ने अनुमान […]
निन्द्रा नपुग्दा के हुन्छ ? सुन्नुहोस डाक्टरको कुरा